ULINGANISA NJANI ISOFA (ISIKHOKELO SOYILO LWANGAPHAKATHI) - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Indlela yokulinganisa iSofa (Isikhokelo soYilo lwangaphakathi)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sendlela yokulinganisa isofa kuyilo lwakho lwangaphakathi.
Isofa sisiqwenga seankile kwaye iye yaba ngumgangatho ekuhonjisweni kwekhaya. Yeyona fenitshala isetyenzisiweyo kwaye yenye yezona ndawo zintle kwigumbi- kulapho ukonwabisa iindwendwe, kulapho abantwana bakho bechitha khona ixesha labo kwaye ukuba unezilwanyana zasekhaya, kungenzeka ukuba ibe yindawo kukodwa.
Isofa ikwabonisa umbono wakho wesitayile kwaye ucebisa ngesimbo sokuhombisa segumbi kunye nekhaya lakho. Ukuba nesofa hayi kwigumbi lokuhlala kuphela, kodwa kwamanye amagumbi ekhaya lakho kujolise ekuboneleleni kungekuphela nje ngentuthuzelo kunye nokulula; kodwa kwakhona, ukusebenza kunye nokusebenza njengokubonelela ngendawo yokugcina eyongezelelweyo.
Nje ukuba ufumene uyilo olugqibeleleyo kwaye isitayile sesofa , Kuya kufuneka uthathele ingqalelo kwaye uqinisekise ukuba isofa oyikhethileyo iyakulingana ngaphakathi kwisithuba sakho, kwaye isikali esifanayo nesinye ifanitshala yakho. Kukho imilinganiselo ebalulekileyo kwaye ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa kufikwa ubungakanani besofa . Kweli nqaku siza kuchaza ukuba yeyiphi imilinganiselo oyifunayo kunye nendlela yokulinganisa isofa yakho.
yintoni imatroni yozuko
Indlela yokulinganisa eyiyo yeSofa
Ukulinganisa Ububanzi beSofa
Ukulinganisa ukuphakama kwesofa
Ukulinganisa Ubunzulu beSofa
Ukulinganisa Ububanzi besihlalo
Ukulinganisa Ukuphakama kwesihlalo
Ukulinganisa Ubunzulu beSihlalo
Indlela yokulinganisa iSofa yeCandelo
Wazi njani ukuba isofa / icandelo liya kulunga?
Indlela yokulinganisa iSembozo seSofa
Linganisa ubude beSimbozo
Linganisa iSihlalo seSihlalo
Linganisa ububanzi boSofa
Linganisa ubude beCushion
Linganisa iSofa epheleleyo
Xa ulinganisa isofa, misela ububanzi ukusuka kwingalo ukuya kwingalo kuba lelona candelo libanzi lesofa. Ukuba kunokwenzeka, isihlalo sesofa sakho siqengqele iingalo, linganisa ukusuka kweyona ndawo ibanzi yengalo ukuya kwenye ingalo. Isofa yesayizi esemgangathweni inobubanzi obuqhele ukulinganisa i-6 ukuya kwi-8 yeenyawo ubude kunye nomgangatho wokuthandana oqhelekileyo uhlala ulinganisa i-4 ukuya kwi-6 yeenyawo ubude. Funda ngakumbi malunga izitayile zengalo yesofa Apha.
Ekufumaneni ubukhulu bokuphakama kwesofa, linganisa eyona ndawo iphambili yesofa yesofa. Kwisofa ebuyela ngasemva, qiniseka ukuba ulinganisa ukusuka embindini weyona ndawo iphambili ukuya ezantsi.
Elinye lawona manyathelo abalulekileyo anokuwathatha bubunzulu besofa. Linganisa ngaphandle nangaphandle komphetho wesihlalo yonke indlela eya ngasemva. Ukuyilinganisa ukusuka kumacala kuya kuba ngcono. Isofa yesayizi esemgangathweni inobunzulu obuhlala buyi-intshi ezingama-32 ukuya kuma-40 intshi ngelixa isofa yothando ikwi-intshi ezingama-28 ukuya kwezingama-30 ubunzulu.
Ukulinganisa ububanzi besihlalo sesofa, qaphela ukuba ngumgama phakathi kweendawo zokubeka iingalo. Ke, kuya kufuneka ufumane umlinganiso welinye icala kwelinye icala lendawo yokuhlala. Kwisofa engenasandla, ububanzi besitulo buhambelana nobude besofa.
Ekufumaneni ubukhulu bomphakamo wesihlalo sesofa, linganisa ukusuka kumgangatho ukuya kuthi ga kumda womphetho wesihlalo somqamelo.
Ukuze ufumane ubunzulu besihlalo sesofa, linganisa ukusuka kumda wangaphambi kwesihlalo sokuhlala ukuya kwindawo apho iqonga elingasemva liqala khona.
Zintathu ubukhulu ezahlukileyo iintlobo zeesofa zecandelo ungakhetha ekufumaneni ulungelelwaniso olufanelekileyo lwendawo yakho.
• Isofa encinci enamaqhekeza amabini ahlala emile okwe-L kwaye adityaniswe iisofa ezimbini okanye isitulo sothando kunye netulo. Isofa yecandelo elinendawo yokuhlala yegumbi lokuhlala ine-avareji ye-195 ukuya kwi-215 intshi kwaye inobunzulu obuphakathi kwee-intshi ezingama-37 ukuya kuma-40.
• Isofa ephakathi enamaqhekeza amathathu ahlala emile okwe-U kwaye indibanisela isofa, isitulo sothando kunye negumbi lokuhlala. Ubude obuqhelekileyo besofa yecandelo lezihlalo ezintathu zii-intshi ezingama-78 ukuya kwezingama-88 nge-avareji yokujula kwama-70 e-intshi
• Isofa enkulu yecandelo edla ngokuba iziqwenga ezine / iziqwenga ezihlanu kunye nesihlalo esinamalaphu amathandathu. Isofa yesiqwenga secandelo elinamaqhekeza amahlanu anamacala alinganayo anomlinganiso ophakathi we-95 nge-95 intshi.
Ukulinganisa isofa yecandelo elinobude be-wedge, linganisa umgama phakathi komlenze wasekhohlo ongasekhohlo kunye nomlenze wasekunene ngasemva. Ukulinganisa ubunzulu, qala kwicala elingaphambili elijonge kwicala elingasemva lecandelo.
Ukuze uqiniseke ukuba isofa yakho okanye isihlalo secandelo siya kulunga, kuya kufuneka ulinganise ubukhulu bendawo yakho yokuhlala ngokujonga ubude, ubude nobubanzi begumbi apho ufuna ukubekwa khona isofa okanye icandelo lakho.
Cinga ngemilinganiselo yazo zonke iicandelo ezinje ngomnyango wangaphambili, iipaseji kunye nezinyuko. Ukuba isofa okanye icandelo lakho liya kubekwa phambi kwefestile, linganisa ukuphakama kwefestile ukusuka emgangathweni uqiniseke ukuba isofa yakho ayikho ngaphezulu kunefestile yakho.
Xa ufuna ukuhlaziya kunye nokugubungela ipatheni yokuphelelwa lixesha okanye ufuna nje ukukhusela isofa yakho, eyona ndlela ilula kukubeka isiliphu ngaphezulu okanye isembozo sesofa. Siza kukunika iingcebiso ezimbalwa zokukunceda umlinganiso kwaye uqiniseke ukuba ikhava yakho yesofa iya kulunga ngokugqibeleleyo.
Ukuchonga ubude obude bekhava yesofa, linganisa isofa yakho ukusuka ngaphandle kwengalo enye ukuya kwenye ingalo.
Linganisa ubude ukusuka kwelinye icala lesofa ukuya kwelinye uqiniseke ukuba ulinganisa kwelona candelo libanzi. Apha ngezantsi nje kwesihlalo sesofa, linganisa ubunzulu bomqamelo.
Linganisa umda ongaphandle kunye nobunzulu, ukuqala ngokulinganisa ngaphambili nangaphandle komphetho wengalo enye yesofa; Ukuqhubekeka kwikona yangasemva kwaye ujikeleze umva wesofa. Gqibezela imilinganiselo yakho ngokulinganisa ngaphambili nangaphandle komphetho wengalo yesofa.
Ukuchonga ukuphakama komqamelo wesofa, fumana imilinganiselo yokuphakama kwesihlalo somqamelo, ngokulinganisa ukusuka kumgangatho ukuya phezulu kwesihlalo somqamelo.
Linganisa isofa ukusuka kumgangatho ukuya phezulu.
Ukufumana ezinye izinto ezinxulumene noyilo jonga igalari yethu ye iintlobo zamalaphu esofa .
umtshato umbulelo weetemplate zekhadi
yimalini iringi eyi-6 eqatywe yidayimani
iindidi imilo kophahla
iingoma zothando ezilungileyo eziye zabhalwa
Eyona midlalo yokuhlamba yomtshato ilungileyo
umahluko phakathi kokuphoswa kunye no-ms kunye no-mrs